आईपीएल कपाल हटाउन घर प्रयोग को लागी युक्तिहरु - समाचार समाचार - शेन्ज़न नो स्मार्ट स्मार्ट प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
आईपीएल कपाल हटाउन घर प्रयोग को लागी सल्लाह
समय: 2019-12-06 हिट्स: 5
गाढा छाला टोनका लागि किन आईपीएल उपयुक्त छैन?
किनकि गाढा छालामा अधिक मेलेनिन हुन्छ, यसले सुरक्षित, सिफारिश गरिएको प्रकाश ऊर्जा भन्दा बढी शोषण गर्न सक्दछ जुन असुविधाको कारण हुन सक्छ।
के म आईपीएल भन्दा पहिले घामबाट टाढा रहनु पर्छ?
यदि तपाईंको छाला टोन कृत्रिम वा प्राकृतिक ट्यानिंगको कारण गाढा भयो र तपाईंको छाला कुनै जलनबाट ग्रस्त छैन भने नोबल स्मार्ट M2 उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के यो पुरुषहरूको लागि उपयुक्त छ?
पुरुषहरूले काँधबाट नोबल स्मार्ट एम २ प्रयोग गर्न सक्दछन् (छाती, पछाडि, हतियार, पेट, खुट्टा)। यो अनुहार, घाँटी वा जननांग क्षेत्र मा प्रयोग हुँदैन। पुरुष दाह्री वा अनुहारको कपालमा प्रयोग गर्नाले असमान परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
उपचार सुरू गर्दै
नोबल स्मार्ट M2 कसरी उत्तम प्रयोग गर्ने
के आईपीएल घनिष्ट क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त छ?
आईपीएल बिकिनी लाइनमा प्रयोगको लागि सुरक्षित छ, तर यो जननेन्द्रिय क्षेत्रका लागि उपयुक्त छैन जहाँ छालाको गाढा रंग हुन सक्छ र जहाँ कपालको घनत्व बढी हुन्छ, जसले बढी प्रकाश उर्जा ग्रहण गर्दछ र असुविधा उत्पन्न गर्दछ।
के म मेरो अनुहारमा आईपीएल प्रयोग गर्न सक्छु?
M2 गालामा हड्डी मुनि अनुहारमा प्रयोगको लागि सुरक्षित छ। यो आँखाको नजिक र निधारमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो माथिल्लो ओठ, चिन र jawline मा प्रभावी ढंगले काम गर्दछ। हामी प्रयोग गर्नु अघि प्याच परीक्षण गर्न सिफारिस गर्दछौं।
सामान्य कपालको बृद्धि चक्र व्यक्तिको बिच भिन्न हुन्छ र १ area-२18 महिनासम्म लिन सक्दछ, शरीरको क्षेत्रका आधारमा (अंडरआर्म, तल्लो खुट्टा र बिकिनी क्षेत्रले अधिक समय लिन सक्दछ)। किनकि उनीहरूको बढ्दो चरणमा कपाल मात्र प्रकाशको साथ उपचारको लागि अति नै संवेदनशील हुन्छ, निरन्तर चिल्लो छाला प्राप्त गर्न धेरै उपचारहरू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस कारणका लागि, हामी सिफारिस गर्दछौं a
यहाँ के तपाईं आईपल कपाल हटाउने बारे जान्न चाहानुहुन्छ
इष्टतम परिणामहरू प्राप्त गर्न -4-१२ साप्ताहिक उपचारहरूको सुरूवात चरण। यदि तपाईले अब कपाल बढेको देख्नुहुन्न भने तपाईले पूर्ण १२ साप्ताहिक उपचार पूरा गर्नुपर्दैन। तपाईं मर्मत उपचारमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
कपाल हटाउने परिणामहरू कायम राख्न म कति पटक उपचार गर्नेछु?
तपाईंको सुरूवात चरण पूरा गरेपछि, तपाईं आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपचार गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। प्रति आवश्यक आधारमा रिट्रीट गर्नुहोस्।
म कसरी आईपीएल पछि मेरो छालाको ख्याल राख्नु पर्छ?
हामी सल्लाह दिन्छौं कृत्रिम प्रकाश स्रोतहरूमा पर्दाफास नगर्नुहोस्, जस्तै ट्यानिंग बुथहरू वा सोलारियमहरू। कुनै पनि गतिविधि वा छालाको उत्पादनहरू वेवास्ता गर्नुहोस् जुन उपचार पछि २ hours घण्टाको लागि तपाईंको छालामा खलल पुग्न सक्छ। यसले तातो टब वा सौनाहरू समावेश गर्दै, कडा फिटिंग कपडा लगाएर, ब्लीचिंग क्रीम, अत्तर उत्पादित वा छीलो उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछ। माथिको कारणले इलाका क्षेत्रमा जलन, खुजली र रातोपन जस्ता हुन सक्छ।
के म आईपीएल पछि सूर्यबाट बाहिर बस्न आवश्यक छ?
उपचार पछि, हामी सनस्क्रीन एसपीएफ १ using प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं जब पनि उपचार गरिएका क्षेत्रहरू घाममा पर्न सक्छ।
के M2 महिलाहरु जो गर्भवती वा किशोर किशोरीहरु द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
उत्पादनलाई यी समूहहरू बीचमा परिक्षण गरिएको छैन त्यसैले यो प्रयोग गर्नु हुँदैन।
के मलाई जेल प्रयोग गर्न वा प्रतिस्थापन बत्तीहरू किन्न आवश्यक छ?
M2 ले थप लोशन वा जेलको आवश्यकता बिना काम गर्दछ र अन्य उपकरणहरू जस्तै प्रतिस्थापन बत्तीहरू खरीद गर्न आवश्यक पर्दैन।
के मैले चश्मा लगाउनु पर्छ?
हामी M2 प्रयोग गर्दा गग्गल लगाउने सल्लाह दिन्छौं। यद्यपि छाला सम्पर्क सेन्सरले यो सुनिश्चित गर्दछ कि उपकरण मात्र ट्रिगर गर्न सकिन्छ जब छालाको सम्पर्कमा हुन्छ र उपचारको बेलामा देख्न सकिन्छ प्रकाश पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छ।
अघिल्लो: कपाल हटाउने उपकरणहरूको प्रयोगमा गलतफहमी
अर्को: कपाल हटाउनको लागि तीव्र पल्स लाइट (आईपीएल)